LAYAABKA DAAWO SAWIRO: Dal soo saaray Khamri loo bixiyay Somaliya & Suuqyada oo si caadi ah loogu iibinayo! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta LAYAABKA DAAWO SAWIRO: Dal soo saaray Khamri loo bixiyay Somaliya & Suuqyada...
China (Halqaran.com) – Khamri loogu magac daray Soomaaliya ayaa lagu arkay suuqyada dalka Shiinaha, iyadoo si caadi ah looga iibinayo dadka isticmaala.
Khamrigan oo ay ku dul qoran tahay Soomaaliya oo far waa-wayn ku qoran ayaa laga heli karaa super marketyada waaweyn ee dalka Shiinaha, iyadoo lagu dhejiyay sicirka ay joogto.
Qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ee ku nool dalka Shiinaha ayaa baraha bulshada ku faafiyey muuqaallo ay ka soo qaadeen khamrigan oo yaalla goobaha ganacsiga.
Ilaa iyo hadda lama oga sababaha ay shirkadaha dalka shiinaha khamrigan ugu bixiyeen Soomaaliya, iyadoo la og yahay in Soomaalidu yihiin dad muslim ah oo neceb khamriga.
Ugu dambeyn, qaar ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Shiinaha oo ka carooday arrintan ayaa ku tilmaamay xad gudub iyo magac dil lagu sameynayo magaca dalkeena hooyo, waxayna ugu baaqay Dowladda federaalka iney dabagal ku sameyso, sharciga caaalamiga ah la tiigsato shirkadaha shiinaha ee soo saara khamrigan.
Dal soo saaray Khamri loo bixiyay Somalia
Suuqayada oo caadi looga iibsanayo